Yakachipa CNC kutendeuka kabhoni simbi fekitori uye vatengesi | Ouzhan
Iwo ekuchinjika zvikamu zvemuchina nzvimbo inokodzera kwazvo kugadzirisa ekushandira mhando mhando senge dzakakombama zvikamu uye yakakomberedzwa maturu ekushandisa. Mativi akakombama anoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri minda, senge turbine mashizha, ngarava dzinofambisa, zvigadzirwa zvemaindasitiri zvine cylindrical conical huso, zvichingodaro. Kazhinji, iyo yakakomberedzwa pamusoro inogadziriswa nekutendeuka.
Carbon simbi ndeye iron-kabhoni chiwanikwa chine kabhoni zvemukati me0.0218% kusvika 2.11%. Iyo inonziwo kabhoni simbi. Kazhinji, zvakare ine shoma shoma yesilicon, manganese, sarufa, uye phosphorus. Kazhinji, iyo yakakwira iyo kabhoni yezvinhu yesimbi kabhoni, inowedzera kuomarara uye inowedzera simba, asi iyo yepasi ipurasitiki. Carbon simbi CNC kutendeuka inoshandiswa zvakanyanya uye inokodzera mazhinji emagetsi zvikamu. Ouzhan ichaita zvehunyanzvi kugadzirisa zvigadzirwa zvemuchina zvinoenderana nemadhirowa ako nezvinodiwa.
Simbi CNC Turning-Precision Carbon Simbi Turning Zvikamu Machining Center
Zvakanakira Ouzhan Carbon Simbi Yakatendeuka Zvikamu
- Mutengo wakaderera, zviri nyore kunhuwa
- Kwakanaka kugadzira tekinoroji
- Kuvandudza mashandiro (C%, kupisa kurapwa)
- Kurumidza kugadzirwa kutenderera, kuendesa nekukurumidza
OEM yakagadziriswa kabhoni simbi yekushandura sevhisi-China Shanghai CNC kabhoni simbi inotendeuka zvikamu mugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, inogona kugadzirisa kabhoni simbi ine yakagadzika uye yakavimbika yepamusoro-chaiyo CNC yekuchinja zvikamu. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuve nechokwadi chakakwana kugadzira kwekabhoni simbi yekushandura michina zvikamu. Uye zvakare, iyo CNC yekushandura kabhoni simbi zvigadzirwa zvinopihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro uye inogona kushandiswa mune akasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa inokwikwidza kabhoni simbi CNC yekushandura zvigadzirwa kune edu akakosha vatengi.
Ouzhan kabhoni simbi inotendeuka zvikamu zvemuchina zvikamu zvakanakira
(1) Kutendeuka kwakakodzera kugadzirisa kwakasiyana-siyana kwemukati nekunze kutenderera nzvimbo. The machine zvakarurama siyana kutendeuka ndiye IT13, IT6, uye pamusoro roughness Ra ukoshi 12.5, 1.6.
(2) Iyo yekushandura chishandiso ine yakapusa dhizaini uye nyore kugadzira, iri nyore kune inonzwisisika kusarudzwa kwechishandiso zvinhu uye geometric angle maererano nekugadzirisa zvinodiwa. Izvo zvakare zviri nyore kurodza uye kuunganidza uye kukatanura kutendeuka maturusi.
(3) Turning ine simba inochinjika kune chimiro, zvinhu, kugadzirwa batch, nezvimwe zveiyo workpiece, uye inoshandiswa zvakanyanya. Pamusoro pekushandura marudzi ese esimbi, simbi yakakandwa, uye nesimbi-isimbi, inogona zvakare kushandura isiri-simbi senge fiberglass, bakelite, nylon uye zvichingodaro. Kune dzimwe dzisiri-simbi simbi dzisina kukodzera kukuya, madhaimani ekushandura maturusi anogona kushandiswa kutenderera kwakanaka, uko kunogona kuwana yakakwirira yekugadzirisa kunyatsoita uye zvidiki zvepamusoro zvakashata tsika.
(4) Kunze kwekusaenzana kwepamusoro peiyo isina chinhu, kutendeuka kwakawanda kuri kuramba kuchicheka nechikamu chakaenzana checheka chemuchinjikwa. Naizvozvo, iyo yekucheka simba inochinja zvishoma, iyo yekucheka maitiro akatsiga, inoenderana nekukwirisa-kumhanya uye kucheka kune simba, uye ine yakakwira kugadzirwa kushanda.
Zvakanakira Ouzhan kabhoni simbi yekutendeuka sevhisi
- Ouzhan ine yakasarudzika mhando yekuongorora dhipatimendi, isati yatumirwa, kuona kuti zvigadzirwa zvese zviri mukati mekanganiso renji.
- Yakakwira yekugadzira kugona uye yemakwikwi mutengo.
- Zvese kunyatso cnc CNC kutendeuka kabhoni simbi zvigadzirwa zviri pasi peyakaomarara mhando kuongororwa.
- OEM yekutaura sevhisi inogona kuve nechokwadi chekuti unogamuchira izvo zvaunoda zvigadzirwa, tsigira DDP, CIF, FOB nedzimwe nzira dzekufambisa kuona kuti vatengi vanogona kugamuchira zvinhu zvakachengeteka.
-According kuti vanodhirowa kana ivhu kugadzira ari nemazvo kabhoni simbi akatendeuka zvikamu.
- Ouzhan ine anopfuura gumi nemaviri ekugadzirisa michina, masevhisi akasanganiswa, akajairika mitsara yekugadzira, uye inouya nezvinhu zvechitupa uye nemishumo yekuyedza kwechigadzirwa.
Pashure: Yakasarudzika mehendi yendarira kutendeuka zvikamu zvekugadzirisa zvigadzirwa
Zvadaro: Chinese mugadziri CNC yetsika kabhoni simbi yakagezwa zvikamu
Chinese mugadziri cnc tsika kabhoni simbi mi ...